LG Magna amin'ny horonan-tsary avy amin'ny MWC 2015 any Barcelona | Androidsis
LG dia nanapa-kevitra ny hiloka be eo amin'ny elanelam-potoana. Ary ilay mpanamboatra Koreana vao tsy ela akory izay no nanolotra ny karazany vaovao LG Leon, Magna ary Spirit dia nifantoka mazava tsara tamin'ity tsena ity. Efa nasehonay anao a LG Leon fanadihadiana video, anjaranao izao ny mampiseho aminao ny tsiambaratelo rehetra an'ny finday vaovao vaovao.
Ary ny ekipan'ny Androidsis dia nandeha nankany amin'ny LG stand ao amin'ny MWC haneho anao mankany amin'ny LG Magna amin'ny horonan-tsary, fitaovana afovoany midadasika fa manana endri-javatra mihoatra ny ampy ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa.
LG Magna, efijery 720 ary fikirakirana quad-core
Ao anatin'ny elanelam-potoana navoakan'ny mpanamboatra monina any Seoul, Ny LG Magna dia mpanjaka noho ny endrika teknika sy ny endriny. Tahaka ireo rahalahiny kely, ity fitaovana ity dia manana bokotra fanaraha-maso herinaratra sy fefy ao aoriana, na dia io aza no lehibe indrindra amin'ny haben'ny efijery.
Ary ny LG Magna dia manana Efijery LCD 5 santimetatra mahatratra 249 dpi. Ny mpikirakira azy dia misy soC Qualcomm Snapdragon 410 soC, miaraka amin'ny RAM 1 GB sy tahiry anatiny 8 GB.
Asongadino ny fakan-tsary 8 megapixel aoriana misy ny autofocus, ankoatry ny fananana a Maso an-tsary miisa 5 megapixel ho an'ny sarin'ny fihetsika. Ny batterie 2.540 mAh dia tompon'andraikitra amin'ny fanohanana ny fitaovana rehetra amin'ity fitaovana ity.
Terminal iray izay, na eo aza izany vita amin'ny polycarbonate, tena mahafinaritra ny mikasika azy. Tsy fantatray ny daty fandefasana na ny vidin'ity fitaovana ity, saingy antenaina hipaka amin'ny tsena amin'ity volana ity na amin'ny volana aprily ho avy izao. Ary ny fahafantarana ny politikan'ny vidin'ny mpamokatra Koreana dia tena azo inoana fa eo anelanelan'ny 150 sy 200 euro ny LG Magna.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » MWC 2015: LG Magna amin'ny horonan-tsary. Android afovoany mahaliana
Toa tsy reraka ny lg mivoaka ny terminal antonony
Valiny tamin'i Leonel